बलिउडका ‘मिस्टर पर्फेक्सनिस्ट’ आमिर खान बने शाकाहारी
मुम्बई । बलिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खानले माछा वा मासु खान छाडेका छन् । कुनै समयमा माछा वा मासुविना खाना खान नसक्ने बलिउड स्टार आमिर शाकाहारी बनेका हुन् । उनकी पत्नी किरण रावले देखाएको...
‘सेक्सी’ हिरोइन पूजना प्रधान कसरी पुगिन अस्पतालको कोमामा ?
काठमाडौं । नेपाल रजतपटतकी चल्ति नायिका पूजना प्रधान अस्पतालको कोमामा राखेर उपचार भइरहेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ । राजधानीको एक अस्पतालमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा उनको दृश्व सार्वजनिक भएको हो । खबर अनुसार उनलाई कोमामा...
बलिउडका ३ खान शाहरुख, सलमान र आमिरको कश्मीरमा यस्तो भीडन्त
मुम्बई । अहिले भारतीय चलचित्र बजार बलिउडमा तीन खान कै दबदबा छ । बलिउडका वादशाह शाहरुख खान, अर्का अभिनेता सलमान र आमिर खान । यी बलिउडका अभिनेताहरु घुमिफिरी सबै ठाउँमा पुग्छन् । आमिर र शाहरुखले...
‘ओ माई गड २’ लिएर आउदैछन् अक्षयकुमार !
मुम्बई । बलिउ अभिनेता अक्षय कुमारको सुपरहिट चलचित्र ‘ओ माई गड’को सीक्वल आउने भएको छ । सन् २०१४ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘ओ माई गड’ले सबैलाई मनोरञ्जन दिएको थियो । चलचित्रको सफलतापछि निर्देशक उमेश...
सल्लेरीको चिसोमा ज्योति मगरलाई जाडो भो……..
काठमाडौं, २७ फागुन । अहिले नेपाली ग्ल्यामर्सको बजारमा गायिका ज्योति मगरको माग दिनप्रति दिन बढ्दो छ । अझ उनका हाउभाउ र जिस्कने बानिले समर्थकहरू ज्योति भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । जहाँ जान्छिन् ज्योतिले त्याहा उल्लेख्य...
रेज हीरो अफ भ्वाइस– ३ अडिसनका लागि १ सय ५४ छनौट
दाङ, २७ फागुन । राप्ती अंचलस्तरीय गायन विधाको प्रतियोगिता रेज हीरो अफ भ्वाइस ३ को फागुन २५ गते हापुरेमा गरिएको अडिसनबाट ३० जना प्रतियोगी छानिएका छन् । दोस्रो चरणको प्रतिष्पर्धाका लागि छानिनेहरुमा गोकूल राना,...
अर्जुन कौशलको लोकपप गीतमा कम्मर मर्काएर नाँचे कञ्चनपुरवासी
महेन्द्रनगर २५ फागुन । क्याम्पसको अक्षयकोष स्थापनार्थ आयोजना गरिएको वृहद सांस्कृतिक महोत्सवको दोस्रो दिन लोकपप गायक अर्जुन कौशलले आफ्ना गीतमा दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन गराएका छन् । कञ्चनपुरको उदय बहुमुखी क्याम्पसले अक्षय कोष स्थापनाका लागि आयोजना...
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई २ लाख जरिवाना
मुम्बई । प्रशासनको आदेश उल्लङघन गरेको भन्दै चर्चित बलिउड बादशाह साहरुख खानलाई स्थानिय प्रशासनले २ लाख जरीवाना गरेको छ । शाहरुखकोे घर अगाडिको पार्किङ्ग हटाउन प्रशासनले दिएको निर्देशन नमानेपछि मुम्बईको स्थानीय प्रशासनले डोजर लगाएर...
‘नाई नभन्नु ल ३’ को फस्टलुक सार्वजनिक
काठमाडौं । निर्माता निर्देशक विकास आचार्यले चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ३’ को तयार पारेका छन् । चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल’ र ‘नाई नभन्नु ल २’ बाट निरन्तर सफलता हात पारेपछि निर्माता निर्देशक आचार्यले चलचित्र...
परिवारसहित फेरि आउने वाचा गर्दै फर्किए बलिउड बादशाह शाहरुख खान (फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं । बलिउडका वादशाह ‘किङ्ग खान’ उपनामले परिचित सुपरस्टार शाहरुख खान स्वदेश फर्किनुभएको छ । कन्साई न्यारोल्याक पेन्ट्सको ब्रान्ड राजदूतका रुपमा बजार प्रबद्र्धनका लागि आउनुभएका खानले पेन्ट्सको विज्ञापनमै बढी समय खर्च गर्दै भन्नुभयो “सुन्दर...
‘परिणाम’को रिलिज लक्ष्य जेठको अन्तिम साता
काठमाडौं । हरि पराजुलीद्धारा निर्देशिन चलचित्र ‘परिणाम’ आगामी वर्ष जेठको अन्तिम साता प्रदर्शनमा आउने भएको छ । हाल पोष्टप्रोडक्सनको अन्तिम चरणमा रहेको ‘परिणाम’को तीन वटा गीत मात्रै छायांकन गर्न बांकी रहेको निर्देशक पराजुलीले बताए...
पन्ध्र करोडका लागि बलिउड छाड्दै प्रियंका
मुम्बई । अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले बलिउड छोड्ने भएकी छन् । उनले सधैका लागि बलिउड छोड्न लागेकी होइन् । अमेरीकाको स्टुडियो ‘एबीसी नेटवर्क’को एक रियालटी शोका लागि उनले बलिउड छोड्न लागेकी हुन् । स्टुडियोसँग एक...